भा’इरल चियावालीले यसरि गरिन धुमधामका साथ दोस्रो बिवाह (भिडियो हेर्नुस्) – List Khabar
Home / मनोरंजन / भा’इरल चियावालीले यसरि गरिन धुमधामका साथ दोस्रो बिवाह (भिडियो हेर्नुस्)
भा’इरल चियावालीले यसरि गरिन धुमधामका साथ दोस्रो बिवाह (भिडियो हेर्नुस्)
admin August 17, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 49 Views
अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ। उ’हाँको संघर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामा’जिक संजालमार्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइ’रल बन्न पुग्यो।
सामान्य व्यापार गरेर चिया बेच्दै गरेको मान्छे यस्तो चर्चा पाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ,’ एकदमै खुसी लागिरहेको छ,यस्तो हुन्छ भनेर सपना पनि देख्या थिइन। य ‘त्रो सबैनना दाजुभाइ,दिदीबहिनी,आमाबुबाहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर खासै आशा पनि गरेको थिइन। यति धेरै माया गरिदिनुभएको छ।उहाँहरू सबैलाई मनदेखी नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ‘
उहाँले भन्नुभयो कि,’ मेरो श्रीमानले अब घर फर्किन्छु त भन्नुभयो मलाई तर यस्तो दुखमा छोडेर जानुभएको छ अब म कसरी उहाँलाई स्वागत गरौं ? मलाई उहाँले यस्तो चोटमा छोडेर जानुभयो।मेरो त मनदेखी नै चित्त दुख्या छ। त्यो चोट अहिले तत्काल बि’र्सिहाल्न नसकेको हुँदा अहिले नै हत्तपत्त स्वीकार गर्न गा ‘ह्रो हुन्छ।’
Previous आहा ! भाइरल ७० बर्षिय बुढाले यसरि १६ बर्षिय पुजालाई जुरुक्कै उचालेर फनफनि घुमाए (हेर्नुस् भिडियो )
Next बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?